Author Topic: Anju Panta - Singer Interview (Nepali) (Read 32656 times)
« on: August 25, 2009, 10:09:22 PM »
« Reply #1 on: October 22, 2009, 07:52:55 PM »
anju panta ko foto herum na
« Reply #2 on: October 23, 2009, 02:45:24 AM »
Quote from: suraas on October 22, 2009, 07:52:55 PM
न बिर्सेँ तिमीलाई यसपालि पाँच विधामा मनोनित
यो वर्ष सर्वाधिक चर्चित रहेको गीत 'न बिर्सेँ तिमीलाई' यसपालिको टुबोर्ग इमेज एवार्डका पाँच मुख्य विधामा मनोनित भएको छ। राजधानीमा मंगलबार सार्वजनिक मनोनयन सूचीअनुसार यो गीतबाट गायिका अन्जु पन्त गीतकार विपिन किरण र संगीतकार महेश खड्का आ-आफ्ना विधामा मनोनित भएका छन् । वर्षको उत्कृष्ट गीतको प्रतिस्पर्धामा पनि यो छानिएको छ । साथै यो गीत समावेश एल्बम 'किरण'ले उत्कृष्ट एल्बमको मनोनयन पाएको छ।इमेज च्यानलको यो वार्षिक भिडन्तमा उत्कृष्ट गीतको पुरस्कार पाउन 'न बिर्सेँ तिमीलाई' ले शिव परियारको 'धेरै चोटि', सिने गुरुङको 'मेरो प्यारो', सुगम पोखरेलको 'स्कुल पाठशाला' र नरेन्द्र प्यासीको 'तिमीले दिने माया'लाई उछिन्नुपर्ने छ। त्यस्तै गायनमा अन्जु पन्तसँग विष्णु चेम्जोङ, प्रतिमा राजभण्डारी, सबनम गुरुङ र प्रेक्षा गौतम मनोनित भएका छन्।त्यस्तै रचनामा विपिनले एसपी कोइराला उत्तम भौकाजी वसन्त चौधरी र शीतल कादम्दिनी गुरुङ तथा संगीतमा महेशले न्ह्यू बज्राचार्य आलोकश्री सत्यस्वरुप र प्रविन बराइलीका चुनौती सामना गर्नेछन् । उत्कृष्ट एल्बमको विधा कब्जा गर्ने दाउमा चाहिँ 'किरण'सहित कादम्बिनी, रिफ्लेक्सन अफ लभ, स्कुल पाठशाला र उपमा देखिएका छन्।तर यीमध्ये वसन्त चौधरीको एकल रचना रहेको 'रिफ्लेक्सन अफ लभ'ले उत्कृष्ट एल्बम हात पार्ने सम्भावना बढी छ। किनभने यो पुरुष गायन महिला गायन पुरुष पप महिला पप वर्षको गीत एल्बम रचना संगीत र एरेन्ज तथा म्युजिकभिडियोका पाँचमध्ये चार गरी १३ विधामा मनोनित छ । यसपछि शीतल कादम्बिनी गुरुङको 'कादम्बिनी' एल्बमले ६ विधामा मनोनयन बटुलेको छ। यो पुरुष गायन एल्बम वर्षको गीत रचना र म्युजिक भिडियोका दुई विधामा मनोनित छ ।गायनका दुई विधामा मनोनित गायकमा एडि्रयन प्रधान र गायिकामा प्रतिमा राजभण्डारी रहेका छन् । जगदीश समाल हेमन्त शर्मा शिव परियार सत्यराज आचार्य र शैलेश सिँह पुरुष गायन तथा निमा रुम्बा सुगम पोखरेल दीपेशकिशोर भट्टराई एडि्रयन प्रधान र सनुप पौडेल पुरुष पपगायनको उपाधिका लागि भिड्दैछन् । महिला पप गायनमा प्रतिमा राजभण्डारी सिने गुरुङ श्रद्धा राई प्राश्ना शाक्य र पुष्पा पौडेलको प्रतिस्पर्धा हुनेछ।फिल्मको गीततर्फ 'सिलसिला'को 'सागरसरी...', 'जीवनमृत्युको 'तिमी फूलै फूलको....', 'खलनायक' को 'मागेर पाउने भए....', 'सानो संसार'को 'सायद मायामा...' र 'म तिमीबिना मरिहाल्छु'को शीर्षगीत मनोनयनमा परेको छ ।यो ११ औं वार्षिक संगीत एवार्ड कार्यक्रममा यसपालि कलाकारहरुले २५ विधामा भिड्नेछन् । हरेक विधामा पाँच कलाकार वा गीतलाई मनोनित गरिएको छ। प्रतिस्पर्धामा २०६४ चैतदेखि २०६६ जेठसम्म रिलिज भएका एल्बमका गीतलाई समावेश गरिएको छ। मनोनितबाट सर्वोत्कृष्टको छनोट एसएमएस इमेल पत्रिका कटिङ र निर्णायक मण्डलका मतका आधारमा गरिनेछ। आगामी भदौको अन्त्यमा हुने पुरस्कार वितरण समारोहमा गीतकार रत्नशमशेर थापा र लोकगायक कुमार बस्नेतलाई इमेज लाइफटाइम एचिभमेन्ट एवार्ड दिइने आयोजकले जनाएको छ।
« Reply #3 on: October 23, 2009, 02:46:51 AM »
चुनौती थपिएको छ-अन्जु पन्त
गिती एल्बम कम्पन सगैदर्शकमाझ लोकपि्रय बनेकी गायिका अन्जु पन्त अहलिे हिट गायिका को रुपमा नेपाली संग्ति क्षेत्रमा दरिएकी छन। न विसे्र तिमीलाइ न पाए तिमीलाइबोलको गीतले अहलिे उनलाइ लोकपि्रयतको शिखरमा पुराएको छ। यो गतिसगै उनी थुप्रै संगीतपे्रमी स्रोतकी ढुकढुकी बनेकी छन। प्रस्तुत छ उनै गायिका अन्जु सगको कुरा कानी
० अहिले नेपाली सगीत क्षेत्रमा तपाईको लोकपि्रयता ह्वात्तै बढेकेा छ नि कस्तो लागिरहेको छ ?
- खुशी पनि लागेको छ चुनौती पनि थपिएको छ। यो अहिलेको मेरो उचाईलाई भोलीको दिनमा कायम राख्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने डर छ ।
० गायनमा आउदा यति सफल हुन्छु भने लागेकेा थियो ?
- थिएन गीत गाउँने रुची थियो तर यसरी चर्चामा नै आउँछु होला भन्ने त सोचेकी पनि थिएन ।
० एक सफल गायिका हुँदाको अनुभव कस्तो हुँदोरहेछ त ?
- सबभन्दा त खुशी लाग्छ । बाटो हिड्दा भने अलि गाह्रो हँुदोरहेछ । सबैले चिन्न थाले त्यसैले खुशी र गाह्रो दुवै हुँदोरहेछ ।?
० अहलिेको समयकी सबैभन्दा व्यस्त र चर्चित गायिका हुनुहुन्छसमय कसी मिलाउनु हुन्छ ?
- रेकर्डिङ र प्रोग्राम एकैदिन पर् यो भने चािहं गाह्रो हुन्छ । तैपनि रेकर्डिङ सारेर पनि प्रोग्राम भ्याउँनु पर्ने हुन्छ । गाह्रो त गाह्रै हुन्छ ।
० यस क्षेत्रमा लागेको कति वर्ष भयो ?
- तेह्र वर्ष भयो ।
० अहिलेसम्ममा तपाईले कति ओटा गीत गाउनु भएको छ याद छ ?
- सात सय जति पुग्ो होला ।
० तपाईलाई कस्तो गीत गाउँन मन लाग्न लाग्छ ?
- मेलोडियस गीत गाउँन मलाई मन पर्छ । गजल पनि मलाई मनपर्छ ।
० गायनमा लागेपछि विदेश कहाँ-कहाँ घुम्नु भएको छ ?
- भारत र बहराइनमा कार्यक्रमकोलागि पुगेकी छु । निकट समयमा नै मलेशिया जाँदैछु ।
० आजभोली चािहं के गर्दै हुनुहुन्छ?
- चलचित्रका गीत र प्रोग्रामहरुमा व्यस्त छु । अनि आफ्नै ुडुएटु एल्बम ुकोषेढुङ्गाु ल्याउने तयारीमा छु ।
० आजभोलि त गीत सुन्ने भन्दा पनि हेर्ने जमात बढ्दै छ नि ?
- हो म पनि समयको मागसँगै बग्दैछु । त्यसैले आफ्नो म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गर्ने सोच बनाएकी छु ।
० अलिकति प्रसंग बदलौ मनोज राजसँग तपाईको प्रेम विहे हो ?
- हो हामीले प्रेम विहे गरेका हौं ।
० कति सालमा विहे गर्नु भयो
- २०५८ सालमा ।
० पहिलो प्रेम प्रस्ताव कस्ले राख्यो ?
- मनोजले नै प्रेमको प्रस्ताव राख्नु भयो
० प्रेम विहे गर्नु भयो आजभोली मनमुटाव हुन्छ कि हुँदैन यस क्षेत्रमा काम गर्नेको त मनमुटाव हुन्छ भन्छन नी ?
मन मुटाव त भइरहन्छ । तर संगीतको विषयमा भने हुँदैन । सानो तिनो कुरामा मनमुटाव हुन्छ ।
« Reply #4 on: October 23, 2009, 02:49:09 AM »
holi ma kantipur ko event ma
« Reply #5 on: October 23, 2009, 09:05:18 AM »
thank you kurakani
some more pics of anju panta
« Reply #6 on: October 23, 2009, 09:05:38 AM »
अञ्जुको लालीओठमा हल्का हाँसो देखियो, उनका आँखाको अव्यक्त चाहनाजस्तो । अञ्जु गायनको उचाइ प्राप्त गर्न लागिपरेकी छिन् । दुर्लंघ्य पहाडमा उक्लिरहेकी यात्रु झैँ । एकपटक चर्चाबाट बाहिरिनै थालेकी यी गायिका फेरि आफ्नो सुमधुर कण्ठलाई संगीतपे्रमीमाझ लिएर उदाएकी छिन् । एउटा गीत, वा भनौँ चल्तीको भाषामा यसलाई गजल भन्ने गरिएको छ, बाट अहिले उनी खुब चर्चामा छिन्-
विना अर्थ दिलमा, सजाएँ तिमीलाई
त्यो यात्रा सुनौलो, अनि साथ तिम्रो
सम्झेर भेट्न बोलाएँ तिमीलाई ।
'यो गीत मेरो जीवनको एउटा उज्यालो पक्ष हो,' शरद ऋतु हाँसेकै वेला अञ्जुले गीतको हलचलबारे सुनाइन्, 'यो गीतले मेरो संगीतको उचाइलाई निकै माथि पुर्‍याइदियो । पूर्णताको विशाल परिभाषा भने हुन्छ यो गीतलाई ।' हुन पनि मान्छेलाई उज्यालो मनपर्छ । उज्यालो जीवनको पूर्ण प्राप्ति हो । अञ्जुको विलुप्त उज्यालो फेरि उदाएको छ- हुरीअघिको बिजुलीको चमकजस्तै ।
अञ्जु पन्त गायिका बन्नुमा अनेक संयोग जुरेका रहेछन् । प्रेमपछि विवाह भएका उनका बाबा पनि गीत गाउनुहुन्थ्यो । 'बाबा-ममीका लागि मात्र गीत गाउनुहुन्थ्यो,' अञ्जु भन्छिन्, 'गीतमा ममीको सौन्दर्यको तारिफ गरेर बाबा कहिल्यै थाक्नुहुन्न'थ्यो ।' त्यसैवेला हो, 'गीत पनि गजबकै कुरा हुँदोरहेछ' भन्ने अञ्जुको मनमा परेको । 'बाबाको गीत गाउने बानीले नै मलाई गायिका बनायो, ममीका लागि माया गरेर बाबाले गीत गाएको वेला सानी अञ्जु आँगनको डिलमा बसेर फनफनी नाचेका दिन सम्झिरहन्छिन् ।
मान्छेलाई मोहको भोक फेरि-फेरि जाग्छ । अञ्जुलाई पनि गीतको भोक जागेको धेरै भयो । त्यो भोक मत्थर पार्न उनले अघाउन्जेल गीतको स्वाद लिएकी छिन् । त्यसो त जवानीमा 'निकै राम्री' अञ्जुलाई हेरेर धेरैले जवानीको स्वाद पनि लिए । धेरै केटाका आँखाको लक्ष्य पनि भइन् अरे उनी ! 'केटाहरू निकै पछि लाग्थे,' जवानीका मीठा दिनहरू सम्झन्छिन् अञ्जु, 'म त हैरानै हुन्थेँ ।' उनलाई पछ्याउँदै आउने केटाहरूको लामो लर्को हुन्थ्यो । 'हे भगवान् अञ्जु पाऊँ' भन्नेहरू त कति-कति । अञ्जुले काठमाडौंको कुनै स्टुडियोमा बसेर गीत रियाज गरिरहँदा सुन्न आउने केटाहरूको ताँती हुन्थ्यो । 'मेरो गीत सुन्न धेरैजना आउँथे,' अञ्जु सम्झन्छिन् । उनका गीत सुन्न आउनेमध्येका धेरैले अञ्जुलाई प्रेम-प्रस्ताव पनि राखे । अनि अञ्जुले नि ? कुनै केटा पछ्याइनन् त ? 'अहँ, मलाई केटाहरूको वास्ता हुँदैनथ्यो । उनीहरू पछि लागेको पनि नराम्रो लाग्दैनथ्यो । बरु कहिलेकाहीँ त डर लाग्थ्यो,' उनले सुनाइन्, 'मेरो तन-मन गीतमै एकोहोरिएको थियो ।' आफ्नो जवानीको सुन्दरता र सर्वस्व गीतमै लगाएको ठान्छिन् अञ्जु ।
अञ्जुको सौन्दर्यपान गर्न अझै पनि केटाहरूले प्रेमका सस्ता कलियुगे संवाद बोलेर हैरान पार्छन् । 'म तपाइलाई पाए अहिले पनि बिहे गर्छु,' भन्नेहरू पनि उत्तिकै छन् जति आरम्भिक जवानीमा हुन्थे । 'आई लभ यू' भन्नेहरू अहिले पनि छन् । 'कति त उमेर पुगेकै पनि त्यसो भन्छन्,' अञ्जुले भनिन्, 'कति सोह्र/सत्रवर्षे पनि होलान् ।' उनलाई पुरुषहरू 'चाँडै उद्वेलित हुने, राम्री केटी देखेपछि 'आई लभ यू' भनिहाल्ने खाले लाग्छन् । 'गम्भीर हुँदैनन् केटाहरू !' उनलाई यस्तै लाग्दोरहेछ । र, अञ्जु पनि प्रेममा परिन् । वर्षौंदेखि संगीत सिक्दा सँगैका साथी मनोज राजले उनलाई खुब मनपराएका रहेछन् । ६ वर्षसम्म मनोजले अञ्जुलाई हेरेरै अनि अञ्जुको सौन्दर्य पिएरै बिताएछन् । हेराहेर खुब चल्थ्यो अरे उनीहरूबीच ! 'उहाँले मलाई धेरै माया गर्नुहुँदोरहेछ,' अञ्जुले सुनाइन्, 'केटाहरू देखेपछि भाग्ने मैले पनि उहाँलाई माया गर्न थालेछु । तर, प्रस्ताव त उहाँले नै राख्नुभयो ।'
प्रेमका मार्मिक धुनहरू खोला, खहरे र जलावतारमा पनि हुँदारहेछन् । स्नेहका विराट् भंगालाहरू एकान्त र निर्जन किनारमा पनि हुँदारहेछन् । अञ्जु र मनोजले आफ्ना प्रेमका धुन खोलाको छङछङमा सुने । खोलाकिनारको ढुंगामा घन्टौंसम्म पल्टेर पानीको ध्वनि टड्कारोसँग सुनिरहे । सुन्दरीजलको खोलामा आफ्नो प्रेम साटेको, अँगालोमा घन्टौंसम्म बेरिएको र आफ्नो भविष्यका लागि योजना बनाएको दिन अञ्जुले बिर्सेकी छैनन् । मनोज यस्ता थिए कि जतिखेर पनि अञ्जुलाई मात्र हेर्न चाहने । 'हामी माया गरेर थाक्दैनथ्यौँ । एकअर्काको अँगालोमा निदाएर माया साट्थ्यौँ । उहाँ पनि हद माया गर्ने, म पनि ! मायामा थकान नहुनेरहेछ,' अञ्जु सुनाउँछिन्, 'हामी भाग्यमानी मायालु जोडी रहेछौँ ।' उनीहरूको प्रेम यति छिटो फस्टाएछ कि आफूहरू प्रेममा परेको थाहा पाएको दुई महिनामै उनीहरूले बिहे गरेछन् । 'बगेको खोला हेर्दै गीत गाइन्थ्यो,' अञ्जु स्मृतिमा हराइरहिन्, 'हाम्रो गीत खोलाको पानीसँगै सुसेली हाल्दै जान्थ्यो । हामी त आफ्नै दुनियाँमा झुल्ने मान्छे । एकान्तमा सारंगी रेटेर गला खुलाइरहने गन्धर्वजस्तो ।'
अञ्जु र मनोजले मायाको बारीमा डुल्दाडुल्दै फूल टिपेका छन् । 'हाम्रो स्नेह कहिल्यै मेटिँदैन,' अञ्जुको विश्वास छ, 'हाम्रो माया कहिल्यै अस्ताउँदैन ।' तीसवर्षे उमेरसम्म आइपुग्दा अञ्जुले अनेकखाले केटा देखिन् । पुरुषप्रति कस्तो धारणा पालेर बसेकी छिन् अञ्जुले ? 'सबै मान्छेको प्रकृति फरक हुन्छ । पुरुषहरू दुःखमा आफूलाई सम्हाल्न सक्दैनन्, बरु हतास भइहाल्ने हुन्छन् ।' अञ्जुको पहिलेको पे्रमी र अहिलेका श्रीमान् एउटै हुन् । पहिले अञ्जुसँग लुकाइ-लुकाई चुरोट खान्थे मनोज । 'पछि बिहे भइसकेपछि के र ? मेरै अघि खुलेरै खान थाले,' अञ्जुले भनिन् । आफ्नो श्रीमान्लाई हेरेर सबै पुरुषप्रति एउटै धारणा बनाएकी छिन् उनले, 'पहिले प्रेममा पुरुष आकाशको तारा पनि ल्याइदिन्छुजस्तो गर्छ । तर, पछि पानीको गाग्रो उचाल्न पनि मद्दत गर्दैर्नन्,' उनले सुनाइन् । उनलाई पुरुषको तुलनामा महिला 'निकै त्यागी र परिस्थिति बुझ्ने हुन्छन्' भन्ने लाग्छ । त्यसो भए महिलाले पुरुषबाट के अपेक्षा राख्छन् ? 'पुरुष राम्रो होस् । रूप नराम्रो भए पनि व्यवहार राम्रो होस् । आफूलाई सधैँ माया गरिरहोस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ नारीको,' उनी भन्छिन्, 'बरु पुरुषले महिलाको रूप र बान्की मात्र खोज्छन् । महिलालाई अनेक रूपमा भोग्न मात्र खोज्छन् पुरुषहरू ।'
अञ्जु पन्तका गीत प्रणय र अनुभूति मिसिएर बनेका हुन्छन् । ती गीतमा वियोग भाव गहिरोसँग मेल खाएका हुन्छन् । त्यसो त उनका पहिले-पहिले गाइएका अरू गीत पनि वियोगान्त नै छन् । उनको पछिल्लो वियोगान्त गीत यस्तो छ-
तिमीले पराइ ठानेपछि पराई हुँदा के भयो र ?
तिम्रो मेरो बीचको नाता भन्नुपर्ने के रह्यो र ?
उनका गीतले पुरुषबाट आफूले पनि प्रशस्त माया नपाएको देखाउँछ । पुरुषसँग सम्बन्ध बिगि्रनेहरूसँग उनका गीत मेल खान्छन् । के यो गीत अञ्जुको वास्तविक जीवनसँग मेल खान्छ ? 'हामी त गीतमा भिज्ने हो । त्यो अनुभूति गर्ने हो । हामीले जुन गीत गाउँछौँ, त्यो हाम्रो जीवनसँग मिल्छ नै भन्ने छैन,' उनले सुनाइन्, 'वास्तविक वियोग भोगिएकोे छैन । मैले त्यो गीत गाउँदा म स्वयं त्यस्ती पीडित महिलाजस्तो भएँ । त्यस्तो गहिरो पीडाको अनुभव गरेँ ।' सुरुमा केटाहरू आकाशको तारा झार्ने गफ गर्छन्, तर पछि सामान्य सहयोग पनि गर्दैनन् भन्ठान्ने अञ्जुले कुन्नि कुन भावले हो आफ्नो श्रीमान्ले अहिले पनि आफूलाई उत्तिकै माया गर्ने गरेको सुनाइन् । अञ्जुलाई त्यतिबिघ्न माया गर्ने श्रीमान्को माया कतिवेला बढी लाग्छ ? 'मलाई हरदम माया लागेको हुन्छ । तर, हामी घरमा सँगै र एक्लै हुँदा बढी माया साटेजस्तो हुन्छ, मलाई त उहाँको निर्दोष आँखा देख्दा झन् धेरै माया लाग्छ ।'
माया पनि कहिल्यै घट्ला र ? तर, सधैँ यत्तिकै माया गर्नु पनि सम्भव छ होला र ? यति धेरै माया गर्ने उनीहरूको मायाको गन्तव्य यो जोडीले कहिल्यै सोचे होलान् ? 'हाम्रो मायामा मैले कत्ति पनि फरक पाएको छैन । म धेरै भाग्यमानी छु । मायाको पनि गन्तव्य हुन्छ र ?'
अञ्जुका श्रीमान् यस्ता अजीवका छन् रे ! उनलाई मनोज फिल्मका हिरोजस्तै लाग्दोरहेछ । 'उहाँ फिल्मीशैलीको मान्छे हुनुहुन्छ,' अञ्जुले भनिन्, 'मलाई राति कुनै वेला 'मसरुम सुप' खान मनलाग्यो भने उहाँ जहाँबाट भए पनि ल्याइदिनुहुन्छ ।' अञ्जुले धेरैका रक्स्याहा पति देखेकी छिन् । रक्सी खाएर श्रीमतीलाई कुट्नेहरू पनि देखेकी छिन् । त्यसो त अञ्जुका श्रीमान् पनि मद्यपान नगर्ने होइनन् । तर, उनलाई कुट्नचाहिँ कुट्दैनन् । 'कहिलेकाहीँ पिएर राति अबेरसम्म पनि घर नआउँदा भने निकै रिस उठ्छ,' उनले भनिन्, 'यो संसारमा मदिरा नबनेको भए सायद लोग्नेमान्छे बिग्रँदैनथे कि ! मलाई ती महिलासँग संवेदना जाग्छ जो प्रत्येक रात मातेका पतिको कठोरताको सिकार बन्छन् र चुपचाप उनीहरूको कुटाइ सहेर बस्छन् ।' हुन त अञ्जु पनि पिउँछिन् । 'म पनि कहिलेकाहीँ मात्तिने गरी 'वाइन' लिन्छु । त्यसरी मात्तिँदा सुखको अनुभव हुन्छ । यसरी पिउँदा म आफ्ना चारैतिर मेरो श्रीमान्लाई मात्र देख्छु । त्यस्तो वेला श्रीमान्को बढी माया लागेर आउँछ ।'
अखिर माया त जहाँ पुगे पनि एउटै हो । मायाले धनी-गरिब भन्दो रै'नछ । राजमार्गमा खोलाको ढुंगा कुटेर जीवनको पांग्रा गुडाउनेहरू अञ्जुको जस्तै मायाको सुख अनुभव गर्न पाउँदैनन् । मनलाग्दा 'वाइन' पिउने र वरिपरि पतिको दर्शन गरिरहने बन्न सक्दैनन् । ती ढुंगा कुट्नेहरूका श्रीमान्हरूले अञ्जुका श्रीमान्को जस्तो मन लागेको वेला रेस्टुरेन्टबाट 'मसरुम सुप' ल्याइदिन सक्दैनन् । मायालाई पैसाले असर गर्छ होला ? 'पैसाले मायामा निकै फरक पार्छ । यदि पैसा छैन भने मायामा पनि कमी हुँदै जान्छ । पैसा भएपछि देखिन्छ माया । तर, जहाँ जस्तो परिस्थितिमा हुर्केकाले पनि माया देखाउन जान्नुपर्छ ।' वेश्यालय पुगेर पनि आफूलाई चोखो ठान्ने धेरै श्रीमान् हुन्छन् । श्रीमतीको अघि उनीहरूकै सान हुन्छ । ती श्रीमान्को दबदबामा श्रीमतीहरू निरीह जीवन बाँच्छन् । वेश्यालयबाट निस्कने पुरुषहरू कुन अर्थमा आफूलाई पवित्र ठान्छन् होला ? 'ती त फटाहा श्रीमान्हरू हुन् नि ! तर, यौन त सबैलाई चाहिन्छ ।
दाम्पत्य र यौनबीचको तादात्म्यता जीवनको सफलता वा असफलतासँग गाँसिने ठम्याइ छ अञ्जुको । दाम्पत्य जीवनको शुद्धताका अगाडि यौनलाई तुच्छ रूपमा प्रस्तुत गर्नुलाई ढोंङ ठान्छिन्, उनी । 'यौनको पनि अर्थ हुन्छ नि ! दाम्पत्य जीवनमा, यसलाई व्यवस्थित गर्न नसके दाम्पत्य जीवन नै धरापमा परेका पनि त छन् नि !' अञ्जुले सुनाइन् । एक-अर्काका यौनइच्छा बुझ्ने सुसुप्त कला दाम्पत्यमा हुनुपर्ने उनको अनुभव छ । 'आफ्नो मान्छेको इच्छा त बुझ्नुपर्छ नि !' अञ्जुले सुनाइन्, 'नत्र अप्ठ्यारो पर्छ ।' उनको विचारमा कतिपय श्रीमतीले नै श्रीमान्को इच्छा बुझेका हुँदैनन् । उनीहरूले श्रीमान्को यौनेच्छा पूरा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले श्रीमान् जान्छ वेश्यालयतिर । त्यो उनीहरूको यौन जीवन व्यवस्थापन नभएको अवस्था मान्नुपर्छ ।' अनि अञ्जुको चाहिँ यौन व्यवस्थापन कस्तो छ ? 'सन्तोषजनक छ, हाम्रो यौनजीवन । अलि धेरै समय हामीबीच सम्बन्ध नरहेपछि म आफैँ सम्झन्छु अहो ! मबाट केही गल्ती हुँदै छ, अनि म त्यसको व्यवस्थापनतिर लाग्छु । दाम्पत्य र यौनको तादात्म्यता यसैगरी मिलाउँछिन् अञ्जु । भन्छिन्, 'मैले पनि कहिलेकाहीँ श्रीमान्लाई बुझेकी हुन्न, म यौन जीवनमा सचेत छु ।'
विवाहअघिको यौन-सम्पर्कबारे अञ्जुको धारणा प्रस्ट छ- मन मिले गरे हुन्छ । 'यो त उमेरको परिणाम हो । नाजायज कि जायज भन्ने कुरै हुन्न । नराम्रो परिणाम आउँदैन भने विवाहपूर्वको यौन राम्रो हो । यसले एकअर्कालाई नजिकबाट बुझ्न सहयोग पुग्छ,' अञ्जुको उत्तर थियो, 'तर यसले विकृति ल्यायो भनेचाहिँ यो नराम्रो हो ।' अञ्जुको पनि प्रेम-विवाह । अञ्जुको चाहिँ विवाहअघि यौन-सम्बन्ध थियो कि थिएन ? 'अँह ! भएन विवाहअघि यौनसम्पर्क,' उनले अतित उनिन्, 'विवाहपश्चात् सम्पर्क राख्न पाइन्छ भन्ने थियो । तर, उहाँ -श्रीमान्) यौन सम्पर्कका लागि निकै जोड गर्नुहुन्थ्यो । म बेवास्ता गरिदिन्थेँ ।' अञ्जुलाई नारी र पुरुषबीचको ठूलो फरक 'नारीहरू कोमल हुन्छन्' भन्ने मात्रै लाग्छ । 'पुरुषहरू कठोर हुन्छन् सबै कुरामा । प्रकृतिले नारीलाई कोमल बनाइदिएको छ,' उनले भनिन् । भीरमा सुनगाभा फक्रनु र नारीको जीवन हुर्कनु उस्तै होइन र ? कुनै कठोर हातले टपक्क टिपेर लैजाने ? 'हो, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । नारीको जीवन पनि कसैले टपक्क टिपेर लैजान्छ । त्यो टिपेर लगेपछि नारीको जीवनको महत्त्व सकिन्छ । तर, मलाई जसले टिपेर लग्यो त्यो फूल सम्हालेर राखेको छ ।' म पनि चाहन्छु, अञ्जु पन्तको जीवन सधैँ ताजा रहोस् ।
स्रोत :- नयाँपत्रिका
« Reply #7 on: December 24, 2009, 03:33:13 AM »
प्रेसर लो छ : अञ्जु पन्त
बुधवार, 23 डिसेम्बर 2009 17:45 नागरिक
अञ्जु पन्त (गायिका)
-खोइ! त्यस्तो कुनै छैन।
-घुम्नको लागि त पोखरा ठीक छ। त्यहाँ धेरै तालतलैया छन्। हिमाल पनि एकदमै राम्रोसँग देखिन्छ। प्रकृतिले धेरै चिज दिएको छ पोखरालाई।
-ब्याडमिन्टन। यो खेल बच्चादेखि खेल्न थालेको, अहिलेसम्म खेल्छु।
-नेपाली खाना नै हो। गुन्द्रुकको झोल, टिमुर हालेको गोलभेंडाको अचार र करेला मलाई एकदमै मनपर्छ। तर, प्रेसर लो छ। करेला र अरू थुपै्र खानेकुरा बार्छु।
-म आफैंले गाएको नयाँ गीत 'जिन्दगी यो फूलैफूलको...' यो गीतको मेलोडीले अर्कै दुनियाँमा पुर्‍याए जस्तो लाग्छ।
-गुलाबी र कालो।
-आफू बसिरहेको ठाउँ धुम्बाराही। यो ठाउँ शान्त पनि छ र सुविधा सम्पन्न पनि। मुख्य कुरा त यहाँ पानीको समस्या छैन।
-अहिलेसम्म स्कुटी चढ्छु। तर, किया कम्पनीको गाडी किन्ने तरखर गरिरहेकी छु।
-फुर्सदमा घुम्न मन लाग्छ। काम गर्दा मोनोटोनस भएको बेलामा श्रीमान्ले काठमाडौं बाहिर घुमाउन लैजानु हुन्छ।
« Reply #8 on: December 24, 2009, 03:34:34 AM »
She won two awards in Hits FM music award
« Reply #9 on: February 21, 2010, 12:26:52 PM »
बढ्दै छ अन्जुको डिमान्ड
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, २०६६ फाल्गुन ८, शनिवार
सागरसरी चोखो माया, नबिर्सेंतिमीलाई, वनमा फुल्यो फुलैफुल, उकालीमा पनि हजुर यी गीतहरु हिट भएपछि दुईबर्षयता अञ्जु पन्तको डिमान्ड बढेको छ । सिनेमाहरुमा प्लेब्याक, कलेक्शन एल्बमको रेकर्डिङ्गमा उनी बिहानदेखि रातीसम्म बिजी भएकी छिन् ।
उनको अर्को व्यस्तता देशभरी आयोजना हुने म्युजिक कर्न्र्सटहरुमा सहभागी भएर पनि हुने गरेको छ । यो हप्ता मात्रै उनी महेन्द्रनगर, चितवन र पाल्पा पुगेर आइन् । 'पुरै देश घुमेर सकिन लाग्यो ।'-उनले भनेकी छिन् । देशका विभिन्न भागहरुमा आयोजना हुने महोत्सवहरुमा उनको डिमाण्ड निकै छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि उनलाई बोलाइरहेका छन् ।
एकबर्षो अन्तरालमा कोरिया, सिंगापुर, युके त उनी पुगिसकिन् । मलेसिया चारपटक पुगिसकिन् । नेपाली नयाँ बर्षो बेलामा हङ्गकङ्गमा गीतकार बसन्त थापाले अन्जु पन्तको सोलो लाइभ सो गर्दैछन् । अमेरिकामा पनि उनी त्यही बेला जाँदैछिन् भने कतार, दुबई आदि देशमा उनलाई ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।